Andilany fiofanana tsara indrindra: Ahoana ny fampiasana sy izay tokony ho fantatrao | Tontolo alika
Susana godoy | | Fitaovana alika, Training
Ny fehin'ny fiofanana dia singa iray hafa izay tsy maintsy anananay tena akaiky koa. Fa na dia toa somary tampoka aza izany dia marina fa iray amin'ireo fitaovana ankafiziny izy io satria hametraka fifandraisana tsy am-bava eo amin'ny tompony sy ny biby fiompiny. Noho izany dia mila mijery manokana ny hetsika tsirairay ianao.
Saingy zavatra ho hitantsika any aoriana any ary toy izany, dia hanampy antsika hahatakatra bebe kokoa ireo fiasa fototra an'io vokatra io. Miaraka amin'ny fatorana fiofanana ataontsika izay hiarovana antsika foana ny bibyNoho izany dia tsy maintsy misafidy ny tsara indrindra ho azy ireo foana isika.
1 Inona no atao hoe famolavolana alika
2 Mandra-pahoviana ny fehin-kofehy fampiofanana?
3 Fomba fampiasana leash fampiofanana hampiofanana ny alikantsika
4 Rahoviana isika no tokony hanomboka hampiasa ilay fehin'ny fiofanana?
5 Aiza no hividianana kofehy fampiofanana alika
Inona no atao hoe famolavolana alika
Belt Training ...
Ny tanjon'ny kofehy fampiofanana alika dia ny fanabeazana ny biby fiompinao. Saingy mifantoka amin'ny fifehezana azy ireo ihany koa izany, indrindra rehefa mandeha mitsangatsangana na angamba mandritra ny fampihetseham-batana ianao. Noho izany dia hitantsika fa manana farango izy io mba hahafahany mitazona azy eo amin'ny vozon'akanjo alika ary avy eo dia vita tsara amin'ny faran'ny ilany izay hitondrantsika azy tsy misy olana.
Noho izany, amin'ny ankapobeny, afaka miteny izany isika ny fampiasana azy dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fihetsiky ny biby fiompinay, ary koa ny fiarovana azy ireo.
Mandra-pahoviana ny fehin-kofehy fampiofanana?
Tsy fanontaniana azontsika atao ny mamaly amin'ny fomba mivantana. Fa maninona Eny, satria ny zava-drehetra dia hiankina amin'ny haben'ny alika indrindra. Ny tiako holazaina dia ny manomboka mila mahafantatra ny lanja sy ny habe ary na ny haavon'ny volonao aza ianao. Amin'izany no ahafahanao mahazo hevitra momba izay ilainy, satria tsy ny alika rehetra no mitovy, na amin'ny fandrefesana na amin'ny toetra.
Noho izany, tsy maintsy lazaina fa ny alika dia mila mihetsika malalaka nefa koa, mamela antsika hampionona, ka ny halavany farany tokony ho 5 metatra, izay ilay antsoina hoe fenitra. Zava-dehibe fa raha kely ny alikanao dia tsy mihoatra an'io halavany io ary tadidio fa aleonao foana manify kely. raha fa raha manodidina ny 20 kilao ny alika dia mila fatorana matevina kokoa ianao satria mila fanoherana bebe kokoa isika fa ny halavany tokony ho 3 metatra dia ampy.
Raha miverina amin'ny alika antonony na kely isika dia fantatsika fa mirona tsy manam-paharetana kokoa izy ireo, tiany ny manimbolo sy milalao amin'ny dingana rehetra, ka tsara kokoa ny miloka amin'ny iray izay azo zahana. Na dia ireo misintona be loatra aza amin'ny fehin-kibo, dia tsara kokoa hatrany ny manao azy ireo amin'ny fohy kokoa. Arak'izany ny fisorohana ireo sotasota sasany rehefa tsy mitandrina isika. Ho an'ny alika lehibe kokoa, ho an'ny fanarahana na handeha hitsangatsangana amin'ny toerana mitokana kokoa, na dia tsy mety indrindra aza izy ireo, dia azonao atao ny mampiasa ny tadiny mihoatra ny 20 metatra izay lava kokoa.
Fomba fampiasana leash fampiofanana hampiofanana ny alikantsika
Toy ny mitranga amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainana, ny tadin'ny fiofanana dia mila torolàlana vitsivitsy ihany koa mba hahafantaran'ny biby antsika azy.
voalohany, tsara kokoa ny mametraka ny tadiny amin'ny toerana mihidy toy ny tranontsika ary avelao handeha hiaraka aminy io.
Aza manintona azy, fa tsara kokoa raha mankany amin'ny antsonao ilay biby ary miaraka amin'ilay fehy hahafahany ho lasa mahazatra.
Raha vantany vao any ivelany ianao dia tsy maintsy mitarika azy amin'ny fotoana rehetra, mba hanatanterahany ny toerana nolazainao, fa ny fisorohana ireo fisarihana notondroinay.
Ny dingana rehetra vitany tsara, tokony hideranao azy izy, na dia mikitikitika na manao ny mifanohitra aminy aza izy, dia hialantsika ny hanatonantsika sy hanalabarana azy amin'izany fotoana izany mba hahatakarany fa misy tsy mety.
Rehefa tery ny fehy ary misarika ilay alika dia mijoroa ary tohizo rehefa hitanao fa mihalefaka kokoa.
Tsy maintsy atombohy amin'ny tongotra fohy ny diany ary raha tsy mihetsiketsika ny biby fiompintsika dia afaka mamaha tady kely kokoa isika. Fomba iray hijanonana hatrany amin'ny fifehezana.
Raha manomboka mitsako ny tadiny ny alikanao dia tsara kokoa ny manary azy ireo amin'ny alàlan'ny fanovana lalana na famadihana azy ireo. Ho tsapanao fa misy zavatra miova rehefa manao izany fihetsika izany ianao.
Ny fanomezana valisoa azy amin'ny loka isaky ny mahavita zavatra tsara toa ny mandeha eo anilantsika ary mijanona tsy misy valisoa rehefa misintona ny tadiny, dia teboka iray tena be mpitia indrindra.
Rahoviana isika no tokony hanomboka hampiasa ilay fehin'ny fiofanana?
Izany koa dia mitranga eo amin'ny fiainantsika ary noho izany, amin'ny an'ny biby fiompy, dia tsy azo avela izy io. Ny tena marina dia vao mainka manomboka ianao, dia tsara kokoa. Satria ho hitanao ihany koa ireo valiny antenainao mialoha. Noho izany, manoro hevitra anao izahay fa raha manana alika kely ianao mandritra ny roa volana dia manomboka amin'ny fiofanana ianao.
Marina fa any an-trano no hanaovanao azy, hampahafantarinao azy ny tadiny, sns. Fa tsikelikely, hampihatra azy ihany koa ianao rehefa eny an-dalana sy amin'ireo baiko noresahintsika teo aloha. Mila faharetana be ianao, loka na valisoa maro ary fotoana ahazoana azy. Fa na izany aza, ho mora kokoa noho ny raha manomboka rehefa olon-dehibe ilay biby.
Aiza no hividianana kofehy fampiofanana alika
Iray amin'ireo teboka tsara indrindra amin'ny Amazon ny fidirana amin'ny tranonkalany dia afaka mankafy a azo atao isan-karazany. Midika izany fa ho eo daholo ny fehin'ny fiofanana. Manomboka amin'ny famaranana amin'ny endriny, loko miloko kokoa na tsy dia mahavariana, halava samy hafa ary mazava ho azy, ny vidiny hafa koa. Midika izany fa afaka misafidy foana izay mety indrindra aminao sy ny alikanao ianao.
Tsy afaka nanadino ny fanendrena azy Kiwoko izy satria iray amin'ireo fivarotana ireo koa izay manome antsika izay rehetra ilaintsika amin'ny biby fiompintsika. Amin'ity tranga ity dia hanana fehin-kibo tsara indrindra ianao, manomboka amin'ny fohy indrindra ka hatramin'ny lava azo alefa amin'ny alàlan'ny sticker na ny tahony. Tontolo iray manontolo tonga lafatra hampiofanana ny alikantsika amin'ny fomba milamina kokoa.
Ny tadin'ny nylon roa, izay iray amin'ny fahita indrindra, ary ireo hoditra voahosotra, dia ho any Tíanimal ihany koa. Saingy tsy noho ny fahasamihafana misy azy io dia mety, fa noho ianao hanananao azy ireo amin'ny loko samihafa sy miaraka amin'ny vidiny mirary, izay anisany matetika ny tolotra hafahafa. Izao no fotoana hanararaotana an'io!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fehikibo fampiofanana